Yini wesandla somuntu: izici, izibonelo, emagama kanye nezincomo
Bambalwa abantu bazi ukuthi ukhuluma ngani wesandla somuntu. Kodwa eqinisweni, izibonakaliso wesandla kungenziwa akhiwa le syndromes kwezokwelapha. Usayizi kanye emthambekeni izinhlamvu, kanye Izigatshana zezinyanga futhi ibenze izibambo zingalandisa uhlamvu komuntu ngisho nokungaphezu kwalokho yena uyazi yena.
Akunjalo abasha, njengoba kubonakala efika kuqala, isayensi graphology ukuthi wesandla elikushoyo uhlamvu komuntu. It is sizibandakanye ukutadishwa emthambekeni izincwadi, ibanga elibahlukanisile nendawo yabo ephepheni. Ukuhlaziywa wembula izimfanelo hhayi kuphela siqu, kodwa futhi amathemba esikhathi esizayo noma ukuba umlutha.
Eqinisweni, ukuhlobana isandla kanye nesimo indoda livele Ephakathi. Ngesisekelo graphology ubhekwa incwadi eyabhalwa Isazi-mlando esingumRoma uSuetonius ngo-16 leminyaka th. Umbhangqwana idatha eminyaka ku graphology abangu systematized Michon. Ubufakazi sokugcina salolu ukuhlobana okwakukhona ukuhlola olwenziwa V Preyer usebenzisa ingqondo - waphefumulela indoda efanayo ukuthi unesikhathi ngezici zobuntu ezihlukile, futhi zokuhlola lokubhala izinguquko kakhulu.
Inhlangano jikelele wokubhala
Lapho ehlaziya yokuqala kuhloliwe evenness ngesandla. Lokhu kuzokwenza ukuthi yimaphi ama side (positive / negative) Kuzoxoxwa ngani lokhu noma lokhuya isici umuntu:
Smooth futhi ihlelwe kahle nge wesandla ebonisa umuntu asebenzayo futhi ebhekiwe ohlale beqiniseka amakhono abo siqu futhi ayinaso ukuthambekela ukwehluleka njalo.
Vala, kodwa hhayi ngempela ehlelekile wesandla elikushoyo impulsiveness.
Small futhi ehlelekile kusikisela ukuthi umnikazi okunengqondo ukusebenzisa amabutho ayo.
abantu Irresolute futhi unamahloni ekuboniseni wesandla amancane kakhulu ihlelwe kahle - kungcono ubuntu singumuntu ongazethembi, emuva ngaleso nobunzima bokuqala.
Of maqondana lomuntu nabantu ababemzungezile ukutshela wesandla ezinkulu noma ezincane. Ebonisa ukuthi ubukhulu encane indoda izinhlamvu - abantu abaningi bafuna ukwazi, ngoba izibalo zibonisa ukuthi inani labamemezeli nge wesandla elincane kancane kunenani labantu ejwayele izincwadi ezinkulu.
Isinyathelo sokuqala ukuba uthole ukuthi iyini imingcele - ezibhekwa izincwadi medium, kuze kufinyelele 3 mm ukuphakama. Ngakho, amancane - 3 mm, futhi ezinkulu - kusuka 3 mm.
Abanikazi wesandla enkulu njalo nobudlelwano futhi esebenzayo, bakwazi ukusekela noma iyiphi ingxoxo futhi bajabule inkampani isidina kunazo.
izinhlamvu kakhulu encane ukukhuluma lwesizotha ukwenqena ukuziqhakambisa yena ngokwakhe. Nakuba kunjalo, kufanele kuphawulwe ukuthi abantu ukubhala ngesandla ezincane, njenge ukuzindla, kodwa kunzima ukulinda isinyathelo esibonisa isibindi kuzo.
A izinhlamvu naphakathi ziqongelelwe abantu bakuthole njalo ukusilela. Ziyakwazi uyaliqaphela ithonya futhi kungaba ukuzivumelanisa yisiphi isimo.
Ayikho ebaluleke kancane ayizindlela kanye umugqa echaza impendulo yalowo muntu ezintweni ezihlukahlukene yangaphandle (Izenzakalo ezihlobene). Lapha udlala indima umuntu aquleke njengoba umugqa kupela igama alukhethiwe ezingeni ngokomzimba, okungukuthi ku-enganakile:
umugqa oqondile ihambisana kumuntu othembekile oye njalo ngokuvumelana nesicelo kanye nezinye ngeke zingafezeki nasezimweni ezinzima.
Yimikhuba imigca lecondzile abonisa nezindaba eziningi kakhulu kokulawula ulwazi.
imigqa Jagged kuyagcinwa kulezo ngaphandle ukuzinza eqinile yangaphakathi.
umugqa Kuqondiswe up ukhuluma okuhle, njengoba kuboniswa umugqa phansi umnikazi pessimist.
Icacisa ibanga phakathi imigqa amazwi ukunikeza kwebalingisi of ukuziphatha kanye engqondweni yomuntu.
Unaphakade Abantu badideke ayisekho uthanda ukwenza isikhawu phakathi kwemigqa esihle. Ukubhala ngesandla ukuthi lithi ngomuntu unake uphinde wenze izinqumo ezinolwazi - umugqa Isikhala esikhulu.
Umthamo isikhala engqondweni nasemzimbeni ukukhombisa ngezikhawu phakathi kwamagama:
izikhala Same phakathi kwamagama kuyinto indoda enekhono ukuqonda isithombe yangaphandle futhi ngenhlonipho ekungalinganini emphakathini.
Amabanga letingemasayizi lahlukene ibonisa ubuntu obuthile engazinzile, elibhekene nomse- kuphela nabantu elibukekayo, futhi lonke nje indiva.
ngezikhawu Esincane elichaza avoidant, Mela nabangane bakhe. Umuntu onjalo akudingi isikhala siqu kakhulu, futhi lukhetha seduze abanye abantu.
Emabanga ezinkulu phakathi kwamagama ukuhlonza ukwesaba umnikazi ngaphambi uxhumane nabanye. Qalani omjwayele nonjalo kuyoba nzima kakhulu, kodwa lapho kusondela kuwo kubonakala kuhle ezithakazelisayo ukukhuluma.
Ngokukhethekile ikhokhelwa lokho akushoyo mayelana wesandla somuntu, uma push usiba noma ipensela zingase zihluke kakhulu komunye kanye nomuntu ofanayo. Sicela uqaphele ukuthi ingcindezi kuwuphawu isimo esingokomzwelo:
Ukucindezela kanzima ukubhala ithuluzi ephepheni iqinisekisa khona unomphela nokuzinza ngokomzwelo zonke izinzwa.
ingcindezi engaqinile libonisa umnikazi njengoba umuntu, sithonyeka kalula ngabanye abantu. Ngokuvamile, laba bantu bazikhethele emkhakheni bokusungula umsebenzi, basengozini nabanye abantu, nemizwa ejulile bengekho nhlobo.
wesandla Isici isitshela ezingeni ukusabela ngokomzwelo, kanye degree of ukuqonda abanye. Abantu nge calligraphy ephelele kunzima ngempela ukuthola, ngakho nombuzo ezivamile - "? Yini i-wesandla umuntu omubi" Eqinisweni, ngaphambi kokuba sicabangele wesandla sakho siqu ezimbi, kufanele ukubhekana nalokhu alandisa ilungiselelo izinhlamvu:
izinhlamvu ngokumile efihla indoda unruffled nokuzola ngubani ngokuvamile qakala kwabanye ngesikhathi lapho abanye bevelelwa imizwa ehlukene kakhulu.
Uma izinhlamvu komtshina esitshekile kuya kwesokudla, liwubufakazi oqondile ukusabela imnene imvelo. Umuntu onjalo angeke ngokuthi esivaliwe kusukela lapho ucabangela lokuqala ngokucophelela zonke ngaphambi ukubonakaliswa nemizwelo.
Ukuthambekela Amplified ngakwesokudla ikhombisa ukucindezeleka okungokomzwelo futhi impulsivity.
Cold abantu amathiphu ngokubhala izincwadi kuze kufike ohlangothini lwesobunxele. Bona avikele ngokwabo kusukela ezizihluphayo kungenzeka futhi ngokuvamile nobugovu aphatha ngayo abanye.
Indlela ukhethe abasebenzi
Kwamanye amazwe aseYurophu, izisebenzi kuyakhethwa ngokuvumelana nezimiso ezicacile, omunye okuyinto Ubuchwepheshe graphology - futhi kuyoba isinyathelo sokugcina kwesivivinyo. Isinqumo sokugcina kwemukelwa umsebenzi kwindawo athathwe kuphela ngemva induna uyazi kahle ukuthi umuntu uthi wesandla (izibonelo ngezansi).
tikhundla lwezezimali e-United States ukuthatha abantu uyakufanelekela kakhulu. Sinenkosi ukuba baphumelele isivivinyo kuhle nzima lapho lokubhala kubalulekile. Graphologist can sinqumo ukuthi umuntu othambekele ukuya enkohlisweni, khona-ke uyoba ukwenqatshwa.
Dlula luhlolo akulula ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, abantu, bokuthi okuyinto wesandla Clumsy ethi umuntu othambekele ukuxabana, simo esishubile, cishe ukuze zithole isikhundla esinedumela emazweni amaningi.
umuntu okhaliphile zokudala ngokuvamile zicatshangelwe yomnyango Umqondisi. Kodwa ukuze athathe le ndawo, kufanele abe izinhlamvu ezinhle wesandla kufanele kube ububanzi futhi nge usayizi ezahlukene, futhi kudinga ukuba khona isilinganiso lesifanele phakathi radii nama-engeli. Ngaphezu kwalokho, isici esidingekayo wesandla okwesikhathi umqondisi umugqa oqondile noma iphakame kancane.
Umphathi ubuntu - umuntu okahle, agodliwe kanye nesineke. Ngakho-ke, ukuthola ekuphathweni okuthunyelwe ezinjalo kufanele wazi ukuthi yini engase ikusho umuntu ngesandla sakhe futhi ukuthi kufanelekile umphathi ukusebenza enkampanini benomusa.
lapho izincwadi ngokubhala kumele ehlotshiswe lemali cishe imperceptible izakhi zokuhlobisa, usayizi ophelele - aphakathi, incwadi ngayinye kumelwe babanjwa.
Cool futhi akha indoda kuhle ukuhanjwa sikhundla, kodwa ikhono lokukhulumisana nabantu ngokubhala futhi kumele abe khona. Ukubhala ngesandla inhloko zobudlelwano nomphakathi kufanele kube njengoba kucacile futhi babe nezici zabo: lokubhala omatasatasa, a wesandla, izincwadi kuxhumene. Ngokuvamile, isignesha, ukukhohlisa komuntu onjalo uphela touch encane.
Isisebenzi emkhakheni wezezimali kumele bakwazi ngokushesha ukugxilisa ingqondo futhi abe nengqondo engaguquki. Yilokhu enza elikushoyo wesandla somuntu elifundeka kalula. Lezo zincwadi kumele kube usayizi esikhulu futhi ibanga phakathi amagama - mkhulu kuvunyelwe.
Man ngubani amaphupho ukusebenza wobunjiniyela, kumele ube engqondweni ephapheme futhi impendulo esheshayo. Kufundzisa kubhala ngesandla umuntu kuyahluka izinhlamvu oyindilinga, lapho abanye angularity samanje. Ibanga phakathi kwamagama futhi imigqa libanzi, futhi izinhlamvu ngokwabo lincane kakhulu.
indoda Witted nge ingqondo kalula uthole iposi abasebenzi kwezomnotho. Kodwa izinkampani elite ngaphezulu kusadingeka ukuthola ekhuluma wesandla somuntu. Lomuntfu kokuthunyelwe kufanele abhale ngesivinini, kuyilapho ngobumnene ngokuletha incwadi ngayinye.
Ungakwazi ngokuzikhethela aphase Imibuzo iDemo ukuthola ukuthi yini umuntu uthi umbhalo (okulotshiweyo ingezansi):
Bhalela okusheshayo bese kancane ijubane isigwebo 4-5 amazwi.
Dweba noma yisiphi isilwane.
Mela sibalo Jomethri.
Thumela umcibisholo ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi.
Uphendvula ngokushesha nokushintsha izimo abantu, umbhalo wesandla akuyona sihluke evamile yayo ekusebenziseni kuqala. Painted imizwa isilwane - kungcono imizwa ukusekelwa umlobi. Ukuba khona engele in a sibalo Jomethri elikushoyo ukwehluleka roundness - Evolution of amandla. A umcibisholo uqonde kubonisa ukuba khona imigomo efanele kanye kokugwingciza - ibonisa ukuthi abantu abaningi bathanda ukukhuluma ukwedlula ukwenza lutho.
Ubufazi emehlweni abantu: debunk ezinye ezinganekwaneni?
Valerie Paulauskas - eyaziwa futhi othandekayo umculi chanson
Kwangemva Kokubeletha paresis izinkomazi: ukwelashwa. yezinkinga zokubelethisa izinkomazi